के तपाईलाई चाहिने भन्दा बढी थकान लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् फुर्तिलो बनाउने र थकाइ मेटाउँने खानाहरु - ज्ञानविज्ञान
हाम्रो शरीरमा सामान्यभन्दा कम शक्ति हुनुलाई थकान भनिन्छ । भिटामिन बी को कमि ले गर्दा हामीलाई थकाई लाग्ने हुन्छ । धेरै शारीरिक परिश्रम गर्दा थकाइ लाग्छ । कहिलेकाहीँ क्षणभरका लागि मात्र थकाइ लाग्न सक्छ भने कहिले लामै समयसम्म त्यसको अनुभूति हुन्छ । थकाइ लागेका बेला भोजनमा ध्यान पुर्या उनुपर्छ ।
–प्रशस्त फलफूल तथा तरकारी समावेश गरिएको भोजनले शरीरमा शक्ति बढाउँछ । त्यसैले बढी मात्रामा फलफूल, तरकारी एवं सलाद सेवन मा जोड दिनु पर्छ ।
–अंकुरित भोजन, फर्सीको बिया, सूर्यमुखीको बियाँ, पेस्ता, काजु, अन्जिर, काजी बदाम आदिको सेवन फाइदाजनक हुन्छ।
–दूधमा मह मिसाएर पिउनुपर्छ ।
–फलफूलमा आँप, अनार, स्याउ, अंगुर, जुनार, तरकारीमा पालुंगोको साग, गोलभेंडा, कुरिलो, च्याउ, हरिया सागपात तथा आलु खानु उपयोगी हुन्छ । ।
–भिटामिन बीको अभावमा थकान महसुस हुने हुँदा दैनिक भोजनमा भिटामिन बीयुक्त भोजन समावेश गर्नुपर्छ । चोकरसहितको गहुको परिकार, ब्राउन राइस, हरिया सागपात, दाल, गेडागुडी, केराउ, दूध, अण्डा, केरा, अन्जिर, पेस्ता तथा काजुमा भिटामिन बी पाइन्छ ।
–माछा–मासुको सेवन पनि लाभदायक मानिन्छ ।
–५ सय मिलिलिटर गाजरको जुस, ३ सय मिलिलिटर चुकन्दरको जुस तथा १ सय मिलिलिटर काँक्राको जुस मिसाएर पिए शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
–१ गिलास अनारको जुस पिउनु शक्तिबद्र्धक मानिन्छ ।
–दिनहुँ २ लिटर पानी पिए शरीरका कोषहरू ताजा तथा स्फुर्त हुनुका साथै बढी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ
–थकाइको उपचारमा पोटासियमको विशेष महत्व हुन्छ । यसका लागि हरिया सागपात तथा दिनमा दुईवटा केरा खानुपर्छ । त्यस्तै क्याल्सियम, सोडियम, जिंक आदिले पनि थकान निवारण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ ।
फुर्तिलो बनाउने र थकाइ मेटाउँने खानाहरु
–प्रशस्त फलफूल तथा तरकारी समावेश गरिएको भोजनले शरीरमा शक्ति बढाउँछ । त्यसैले बढी मात्रामा फलफूल, तरकारी एवं सलाद सेवन गर्नुपर्छ ।
–फलफूलमा आँप, अनार, स्याउ, अंगुर, जुनार, तरकारीमा पालुंगोको साग, गोलभेंडा, कुरिलो, च्याउ, हरिया सागपात तथा आलु खानु उपयोगी हुन्छ ।
–अंकुरित भोजन, फर्सीको बियाँ, सूर्यमुखीको बियाँ, पेस्ता, काजु, अन्जिर, काजी बदाम आदिको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
–भिटामिन बीको अभावमा थकान महसुस हुने हुँदा दैनिक भोजनमा भिटामिन बीयुक्त भोजन समावेश गर्नुपर्छ । चोकरसहितको गहुँको परिकार, ब्राउन राइस, हरिया सागपात, दाल, गेडागुडी, केराउ, दूध, अण्डा, केरा, अन्जिर, पेस्ता तथा काजुमा भिटामिन बी पाइन्छ ।
–थकाइको उपचारमा पोटासियमको विशेष महत्व हुन्छ । यसका लागि हरिया सागपात तथा दिनमा दुईवटा केरा खानुपर्छ ।
–त्यस्तै क्याल्सियम, सोडियम, जिंक आदिले पनि थकान निवारण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ ।
–दिनहुँ २ लिटर पानी पिए शरीरका कोषहरू ताजा तथा स्फुर्त हुनुका साथै बढी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
अत्यधिक थकाइ लाग्नु राम्रो होइन
हरकोही मानिसलाई थकान महसुस हुन्छ । कडा मेहेनेत गर्नेलाई त थकान महसुुस हुने नै भयो तर मेहेनेत नगरी एकै स्थानमा बसिरहे पनि थकाई लाग्छ । जब शरीरमा उर्जा सकिन्छ तब शरीरले थकान महसुस गर्न थाल्छ ।
आराम गरेपछि या सुतेपछि थकान मेटिनुपर्छ । सामान्यतया अधिकांश मानिसहरुमा यसो हुन्छ । तर यद सुत्दा या आराम गर्दा पनि थकाई मेटिदैन भने यो कुनै बिमारको संकेत पनि हुन सक्छ । यसलाई मेडिकलको भाषमा ‘क्रोनिक फटिग’ भनिन्छ । यसले मानिसलाई जतिबेला पनि आलस्य महसुस गराउँछ ।
आलस्यताले उसको मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्तरमा असर पर्छ । व्यस्त दिनचर्या, खराब जीवनशैली, बिरामी, अनियमित या असन्तुलित खानपान, भाइरल इन्फेक्सन अथवा बायो–साइकोलोजिकल कारणबाट यो रोग लाग्न सक्छ ।
अत्याधिक थकान महसुस हुने हृदयघातको पनि संकेत हुनसक्छ । हृदयाघातको ७० प्रतिशत मामिलामा केही हप्ता पहिलेदेखि नै असामान्य थकान अनुभव हुन थाल्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
धूमपान र मदिराबाट टाढै रहने, सन्तुलित आहार लिने र ३० देखि ६० मिनेटसम्म एरोबिक एक्सरसाइज गर्ने गर्दा यसको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यदि हाई कोलेस्टेरोल, ब्लड प्रेसर, सुगर, लिपिड प्रोफाइल, इसीजी, टीएमटी परीक्षण र एन्जिओग्राम पनि गराउँदा सम्भावित खतरालाई रोक्न सकिन्छ ।
Don't Miss it कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिसको आनीबानी र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? जानिराखाैँ
Up Next अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो ? यी फलफूलले चाउरी पन हटाई अनुहार आकर्षण बनाउन गर्दछ
छरछिमेकमा यो समस्या भएका महिला छन् भने उहाँहरूलाई जानकारी दिएर उपचार गराउन सहयोग गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । पाठेघर…